Matongerwo eNyika, 24 Chivabvu 2019
Chishanu 24 Chivabvu 2019
Kongiresi yeMDC Inotanga Zvine Mutsindo muGweru
Kongiresi yeMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa yatanga zvine mutsindo muGweru vatsigiri vebato iri vachitsvukisa nhandare yeAscot yose nezvipfeko zvebato pamwe nezvevanhu vari kukwikwidzana pakongires iyi.
Kongiresi yeMDC Yoenderera Mberi muGweru
MDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekongiresi yayo zvisinei nenyaya dziri mumatare.
VaDumiso Dabengwa Vanoshaya kuKenya
Mutungamiri webato rinopikisa reZAPU VaDumiso Dabengwa avo vange vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe vashaya kuNairobi, Kenya vachibva kunorapwa kunyika yeIndia.
Varwiri vekodzero vashanu vakasungwa mushure mekupinda musangano wezvekodzero dzevanhu kuMaldives vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende.
Mutauriri weparamende, Advocate Jacob Mudenda, varatidza kusafara nemaitiro emakurukota ehurumende ayo asiri kuenda kuparamende kunopindura mibvunzo kubva kunhengo dzeparamende, vachiti vachamhan’ara nyaya iyi kumutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, kuti vatore matanho.
Zvime zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kukurudzira hurumende kuti igadzirise nekukasika matambudziko akatarisana nenyika mune zveupfumi, zvichiti matambudziko aya ave kuzviita kuti zviwedzere kuremerwa nemutoro wekuchengeta hama neshamwari kumusha.